Vela-kevitra – Ny Malagasy sy ny lanjan’ireo taratasy ara-panjakana – Blaogin'i Voniary
Tsy afa-misaraka amin’ny dingam-piainan’ny olombelona ny taratasy ara-panjakana. Izay no entin’i Hanitriniala Rakotoarivelo na Magie Gam ao anatin’ilay loabariandasy mitondra ny lohateny hoe: “Ny Malagasy sy ny lanjan’ireo taratasy ara-panjakana” ny Alahady 05 Mey izao amin’ny 11 ora ao amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina ao Mahamasina.
Ho tanterahina ao anatin’ny « Salon du bien-être et du développement personnel » izy io, izay manomboka anio 02 Mey ka hatramin’ny 05 Mey ho avy izao. Loabariandasy, atrikasa sy fanentanana maro no hita ao ary miompana amin’ny fivelarana maha-olona sy ny tontolo mahafinaritra ary mahasoa avokoa.
Misy lanjany ve ny taratasy?
« Teraka miaraka amin’ny sora-piankohonana isika… Ary maty mamela sora-pahafatesana »
Hoy Magie Gam
Takiana ary ilaina hatrany ny taratasy fanamarihana avy amin’ny fanjakana isaky ny misy zavatra tanterahina. Tsikaritra izany eo amin’ny fiainana manokan’ny olona iray izany, ohatra fahaterahana, fanambadiana, fifindra-monina, fahafatesana, fampitana lova sy ny sisa. Ary vao mainka misy lanjany bebe kokoa ny taratasy ara-panjakana eo amin’ny sehatry ny asa sy ny fandraharahana. Eo amin’ny tontolon’ny fitantanana sy ny fandraharahana indrindra no tian’i Magie Gam itondrana fanazavana manokana. Matetika tokoa lasa sakana amin’ny famoronana orinasa indraindray ny habetsahan’ny taratasy takiana. Paikady sy fanoroana ireo fombafomba samihafa amin’ny fangalana taratasim-panjakana no hozarainy amin’io fotoana io.
Nianatra manokana ny fomba fitantanan-draharaha ny vehivavy ary manana traikefa betsaka eo amin’io sehatra io. Izy no tompon’ny orinasa Lhr’Iventy, izay mpanome torolalana amin’ny fombafomba ara-panjakana ary mpikarakara hetsika sy lanonana.
Raha ny olona andrasana hanatrika ny vela-kevitra indray no asian-teny dia ny olon-drehetra tsy ankanavaka no asaina fa tsy natao ho an’ny sokajin’olona voatokana izy ity.
“Manentana ny olom-pirenena rehetra na amin’ny sehatra inona na amin’ny toerana aiza hanatrika io vela-kevitra io. Zava-dehibe ny fampahafantarana fa misy lanja ny taratasin’ny fiainana iray manontolo. Taratry ny maha olom-pirenena vanona sy vonona hoan’ny Tanindrazana izany.”
fampivelarana ny maha-olona, fivelarana maha-olona, taratasim-panjakana
Andriantsimiavona Christian : olona tia mizara oksyzena sy manapariaka fahatsarana